Shirwaynihii saddexaad ee xisbiga UCID oo furmay | FooreNews
Home wararka Shirwaynihii saddexaad ee xisbiga UCID oo furmay
Shirwaynihii saddexaad ee xisbiga UCID oo furmay
Hargeysa (Foore)-Shirweynihii Sadexaad ee Xisbiga Mucaaridka ah ee UCID ayaa Maanta si rasmi ah uga furmay Huteelka Crown ee Caasimada Hargaysa kaas oo loogu talo galay inuu socdo muddo laba maalmood, waxase aan shirweynahaasi ka maqnaa siyaasiyiin miisaan culus ku lahaa xisbigaasi oo ka baxay markii Eng. Faysal Cali Waraabe diiday inuu wareejiyo hoggaanka xisbigaasi.
Waxa Shirweynahan ka qayb galay Hogaanka Xisbiga UCID ,ergooyin ka kala socda Gobolada dalka kuwaasi oo intooda badani ku cusbaa xisbiga iyo siyaasaddaba , Laamaha Xisbiga UCID ee dalalka dibada,Madax iyo Mas’uuliyiin ka tirsan Xisbiga Udub, Qaar ka madaxda Ururada Siyaasada iyo marti sharaf kale.
Gudoomiyaha Xisbiga UCID Inj.Faysal Cali Waraabe oo madashaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay marxaladihii kala duwanaa ee xisbigani soo maray tan iyo intii ka danbaysay markii la aasaasay,waxa uu Gudoomiyuhu sheegay in fikrada abuurista xisbiga UCID ay ku dhalatay 22kii bishii labaad ee Sannadkii 1992-kii, isla markaana uu hamigiisu ahaa sidii uu wax uga qaban lahaa sidii ay Somaliland aqoonsi buuxa uga heli lahayd dunnida inteeda kale, waxaanu xusay in barnaamijka Xisbiga UCID ay qoritaankiisa bilaabeen sannadkii 1997 isla markaana ay dhameeyeen Sannadkii 2000 , waxa uu Gudoomiyuhu intaas ku daray inuu ka xun yahay in labaatan sanno kadib aynaan weli haysan citiraaf.
Inj.Faysal Cali Waraabe waxaa kale oo uu faahfaahiyay mabaa’diida xisbiga UCID loo aasaasay iyo sida ay wadanka uga saareen hab beeleedkii aynu ku soo dhaqmaynay mudada tobanka sannadood ah iyo qaybtii ay ku lahaayeen u soo digo rogashada nidaamka doorashooyinka xorta ah.
Gudoomiyaha Xisbiga UCID Wuxuu uu soo jeediyay ururada siyaasada ee haatan abuurmay sidii ay cududooda u midayn lahaayeen isagoo intaas ku daray inay xisbi ahaan soo dhawaynayaan.
Geesta kale Xoghayaha guud ee Xisbiga UCID Maxamed Cali Madoobe “Jiir” ayaa goobtaasi ka cadeeyay inuu iska casilay xilkii uu ka hayay Xisbiga Cadaalada iyo Daryeelka isla markaana uu go’aansaday inuu noqdo murashax u tartamaya doorashada Golayaasha deegaanka ee la filayo inay dalka ka qabsoonto bilaha fooda inagu soo haya .
Sidoo kale Xoghayaasha arrimaha gudaha iyo dibada ee Xisbiga UCID ayaa iftiimiyay himilooyinka xisbiga UCID hadii uu ku guulaysto hogaaminta qaranka kuwaas oo ay ka mid yihiin sidii Somaliland xubin buuxda uga noqon lahayd ururka ay ku bahoobeen dalalka barwaaqa sooranka, shaqo abuuris loo sameeyo da’ yarta soo kacaysa, kobcinta dhaqaalaha iyo wixii la hal maala .
Waxaa kale oo halkaasi ka hadlay Gudoomiyaha Urur Siyaasadeedka Umada Dr.Maxamed Cabdi Gaboose, Gudoomiyaha Siyaasada ee Xisbiga Udub Cali Maxamed Warancade, Urur siyaasadeedka Jamhuuriga oo uu u hadlay Cismaan Xasan Mire, Salaadiin iyo marti sharaf kale oo dhamaantoodba soo dhaweeyay qabsoomida shir weynaha Sadexaad ee Xisbiga UCID.
Madaxweyne ku xigeenkii u horeeyay ee Somaliland Mudane Xasan Ciise Jaamac oo munaasibadaas ka hadlay ayaa sheegay in mucaaridka aynu doonaynaa uu yahay mid loogu hiilinayo Muxaafidka isla markaana lagu saxayo markasta oo uu khalad galo isagoo intaas ku daray inay muhiim tahay sidii bulshadeena loo bari lahaa hannaan dimuquraadiyadeed oo ka madhan Cunfi iyo qabyaalad.
Previous PostG/xafiiska siyaasadda Madaxtooyadda oo dhagax dhigay waddo isku xidhaysa Oodweyne Iyo Togdheer Next PostXukuumada Somaliland oo shaacisay magacyada saqaal nin oo ku eedaysan dilkii seemaal